एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १५ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १५ भदौ २०७५)
on: १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:५९ लगानी
एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १५ भदौ २०७५)
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमासमा रू. २६ करोड ४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १२ प्रतिशतले वृद्धि हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. २३ करोड ९ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा रू. ४५ करोड ४८ लाख आम्दानी गर्न सफल भएकाले नाफा बढेको हो । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. १४ करोड छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. ७१ करोड १५ लाख जम्मा भएको छ । असार मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ५१ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी ४५ प्रतिशतले बढेर रू. ६४ करोड ४ लाख पुगेको छ । बीमा समितिले तोकेको पूँजी अझै पुगेको छैन । साथै, कम्पनीले अपुग रकम हकप्रद र बोनस शेयर वितरण गरेर पूँजी पु¥याउने योजना रहेको बताएको छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।
कम्पनीले महाविपत्ति कोषमा रू. ४ करोड २१ लाख छुट्याएको छ । दीर्घकालीन लगानी रू. २९ करोड ८६ लाख रहेको छ भने खुद चालू सम्पत्ति ३३ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।
असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४५ करोड ४८ लाख आम्दानी गर्दा रू. १९ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । कम्पनीले पुनर्बीमा कमिशनबाट रू. १९ करोड ५१ लाख आम्दानी गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढी हो । जारी बीमालेखको सङ्ख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय ६१ र नवीकरण गरिएको बीमालेखको सङ्ख्या ३३ हजार ४ सय ४८ रहेको छ ।
कम्पनीले ५ हजार ३ सय जनालाई रू. ८२ करोड ७१ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने १ हजार ६ सय ४४ जनालाई रू. ६० करोड ९ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्तरीय सेवाका कारण बीमितको विश्वास हासिल गर्न कम्पनी सफल भएको छ । यसैले कम्पनीको व्यवसाय उल्लेखनीय रूपमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । फलस्वरूप कम्पनीले मुनाफा वृद्धि भएकाले लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिन सफल भएको छ ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४० दशमलव ६७, मूल्य आम्दानी अनुपात २२ दशमलव ८७, तरलता अनुपात १ दशमलव ८७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ३९ दशमलव ६४ रहेको छ । बुधवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको ३ गुणा छ ।
डिभिडेण्ड इल्ड रेशियो : प्रतिशेयर लाभांश (गत वर्ष)/प्रति शेयर बजार मूल्य × १००
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ३ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ४ हजार १ सय ३४ कित्ता शेयर खरीद र १ हजार २ सय ३५ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृति बनेको छ । यस आकृतिले कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६५ दिनको करोबारमा न्युट्रल जोन (४७२ दशमलव ०३ स्केल)मा छ । यसले खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६५ दिनको करोबारमा ९ दशमलव १९ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जोखीम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६५ दिनको करोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्यरेखा आपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. ८ सय १७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ८ सय २८ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. ८ सय ४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १ पुस २०७५)
१ पुष २०७५, आईतवार ०८:१८
एनएलजी इन्स्योरेन्सका सञ्चालकको राजिनामा स्वीकृत
१६ मंसिर २०७५, आईतवार १३:५४
एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा बढेपनि जगेडा कोष घट्यो
२ मंसिर २०७५, आईतवार १४:४५
एनएलजी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पन्त
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:३३